Hindiya oo Pakistan ka dalbatay inay sii dayso duuliyaha | Wardoon
Home Somali News Hindiya oo Pakistan ka dalbatay inay sii dayso duuliyaha
Hindiya oo Pakistan ka dalbatay inay sii dayso duuliyaha
Dowladda Hindiya ayaa Pakistaan u dirtay dalab ah siideynta Duuliyihii mid ka mid ah Diyaaradaha Hindiyo oo ay shalay soo riday dowladda Pakistaan oo ay gacanta ku hayaan,xilli ay cirka isku shareertay xiisada u dhaxeysa labada dal.
Baraha Bulshada iyo Warbaahinta qaarkood ayaa shalay lagu soo bandhigay Sawirada duuliyaha Hindiya oo gacmaha ka xiran,waxaana sawiradaas Hindiya ku sheegtay inay tahay mid lagu niyad jebinaya qof dhaawac ah.
Dowladda Paksitaan ayaa sheegtay inay soo riday laba ka mid ah Diyaaradaha dagaalka dalka hindiya,iyada oo ka jawaabeysay duqeyn dhinaca cirka ah oo diyaaradaha Hindiya ay la beegsadeen Xarumo ay leeyihiin maleeshiyad oo ku yaalla Gudaha Pakistaan.
Xiisada u dhaxeysa labada dal ayaa u muuqata mid sii xoogeysatay,waxaana Saacadihii la soo dhaafay dhacay weeraro laba ah,kuwaas oo labada dhinac ay guulo ka kala sheegteen.
Arbacadii, Mareykanka ayaa waxa uu Hindiya iyo Pakistan ugu baaqay inay ka baaqsadaan tallaabo kale oo milateri,hayeeshee weli labada dowladood aysan jawaab ka bixin.
Previous articleKenya oo dacwad ka dhan ah Somalia ugudbisay QM iyo Midowga Afrika
Next articleCiidamada AMISOM oo ka guuraya Kulliyadda Jaalle Siyaad
Qoysas Guryahooda lagu burburiyay Afgooye oo Farmaajo eedeeyay +VIDEO
Weeraro saf ballaaran ah oo lagu qaaday Sacuudiga